Articles & Tips | Pandaing Map
Provide with information about you are interested in schools
9 Oct | 2019
၁။ မိမိတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုယူဆ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကို စွန့်လွှတ်ပါ။ ၂။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ၃။ နောက်ဆုံးအဖြေပေးဆုံးဖြတ်မည့်သူကို ရွေးချယ်ပါ။
ဇော်ဂျီမှာကော အားနည်းချက်ဘာရှိလို့လဲ။ ဇော်ဂျီကလည်း ယူနီကုဒ်လိုမျိုးပဲ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စနစ်က မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် နည်းပညာအသစ်တွေလိုချင်ရင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ မပါရှိခဲ့ပါဘူး။
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ ယူနီကုဒ် ကို စသုံးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲ ? ရေးသားသူ ငြိမ်းချမ်းကိုကို
ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ? ယူနီကုဒ်ကိုဘာကြောင့်ပြောင်းသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၁
ဒီစာကတော့ ယူနီကုဒ်အကြောင်းကို အရမ်းအသေးစိတ်အထိ မဆင်းပဲ နည်းပညာနဲ့ ဝေးသူ နားလည်အောင် ရှင်းပြလိုတဲ့ post တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသားသူ ငြိမ်းချမ်းကိုကို
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်ရမယ့် သက်မွေး အင်္ဂလိပ်စာ • B.A(EPP) ဆိုတာဘာလဲ။
B.A (EPP) ဆိုတာ “အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်” (National Management Degree College)နဲ့ “ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာန” တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတက္ကသိုလ်များ၏ ဒီပလိုမာနဲ့ မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ
3 Sep | 2019
******* အောင်မြင်မှုဟာ ရေရှည်ပန်းတိုင်တစ်ခုပါ ******* လူတစ်ယောက်မှာ အောင်မြင်ဖို့ ကျရှုံးဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဆို တကယ်ခက်တဲ့အရာကရော? အမြဲအောင်မြင်‌နေစေဖို့ ၊ ကျရှုံးမှုတွေကနေ အမြန်ဆုံး ပြန်ထနိုင်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်တယ် ထင်ပါသလဲ။ &quot; လူတစ်ယောက်မှာ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူပါတယ်
4 Jul | 2019
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေဆိုတာ ရှုပ်ထွေးများပြားလှပေမယ့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအရမ်းများတဲ့ ဘာသာ ရပ်တစ်ခုဆိုလည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
“The Main Purpose of Schooling” “ကျောင်းပို့ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်”
6 May | 2019
“ကျောင်းပို့ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်” ကျောင်းဆိုသောအရာသည်လူငယ်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပညာမသင်ကြားခဲ့လျှင်ကျွန်မတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၁ ရာစုရဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာမှ leadershipဆိုတဲ့ skill က ပညာရေးလောကထဲမှာပါမက စီးပွားရေးလောကထဲမှာ ဝန်ထမ်းလောကတွေမှာ လူတွေပါးစပ်ဖျား ရေပန်းစားနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်မှာ အခြေခံ skillsတွေလိုအပ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ Social media
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်မတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ Social mediaတွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ အသုံးပြုမှုတွေကတော့ မတူညီကြပါဘူး။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆို twitter, instagramတို့ကို အသုံးများပြီး အရှေ့ပိုင်းမှာတော့ facebook ကိုအသုံးများပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိမိဘများသည် မိမိတို့ရင်သွေးများကို ကျောင်းနေရင်အားလုံးလုပ်တတ်သွားမှာ ဟူသောအစွဲများရှိနေတတ်သည်။ မူကြိုမနေခင်အရွယ်တွင် တတ်သင့်သောအရာများကို မသင်ကြားပေးဘဲ မိဘများကကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်ပေးလေ့ရှိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေဆဲ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း များပြားလျက်ရှိသည်။ သို့သော်အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ များပြားသော်လည်း လက်ရှိတွင်ကျောင်းပြီးဘွဲ့ရထားသော ကျောင်းသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်များလုံလောက်မှုမရှိသေးပေ။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ပညာရေးစနစ်ဟာ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ စနစ်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆရာမတွေနဲ့တော့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
IQ နဲ့ EQ ဆိုတာဘာလဲ
Q ဆိုတာဘာလဲ။ EQ ဆိုတာဘာလဲ။ IQဆိုတာ Intelligence Quotient ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာတွေကို သင်ယူနိုင်မှု ၊ ကျွမ်းကျင်မှု အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။EQ ဆိုတာကတော့ Emotional Quotient ဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှု ၊ အကျင့်စရိုက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနားလည်ပေးနိုင်မှု အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ် လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် သိရပါတယ်။